Sida loo badalo AVCHD in QuickTime daaqadaha? o
Qeybta 1: Waa maxay sababta ay u badalaan AVCHD in wmv?
Qeybta 2: Isticmaal Wondershare Video Converter Ultimate si loogu badalo AVCHD in wmv
Qeybta 3: Talooyin sida ay u gudbiyaan videos AVCHD ka kaamirada daaqadaha
The default iyo qaabka ugu fiican in dadka isticmaala daaqadaha door bidaan in ay isticmaalaan waxaa loo yaqaan wmv ama Windows Media u Video sida ay tahay mid ka mid ah qaababka ugu fiican in uu yahay duq ah oo hubiyaa in user helo waayo-aragnimo ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira. Tutorial ayaa sidoo kale soo bandhigi doona user fiican iyo gobolka convertor tahay in loo isticmaali karo si loo hubiyo in files AVCHD waxaa diinta qaab wmv ah oo aan wax arrintan iyo dhibaato.
Part1: Waa maxay sababta ay u badalaan AVCHD in wmv?
Waxaa jira sababo badan si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah oo ay hesho natiijooyinka ugu fiican marka ay timaado qaab wmv iyo qaab AVCHD mid weyn waxaa marmar dhif ah loo isticmaalaa in arrintan la xiriira. Marka ay timaado in sababo diinta ka dibna waa in la ogaadaa in user waa inay hubiyaan in faa'iidooyinka ugu fiican ee qaab wmv yihiin ma ahan oo keliya loo arkaa laakiin sidoo kale codsatay in hab ugu fiican si loo hubiyo in natiijada kama dambaysta ah waa line n la iskaga baahan isticmaalaha. Waxa kale oo hubin doona in user helo natiijada in ay yihiin cabsi badan oo gobolka ka mid ah tahay sida faa'iidooyinka qaab diirada la ogaan doonaa. Si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican waa taas daraaddeed waxaa lagula talinayaa in ay sida ay sidoo kale hubin doona in user helo sababaha ay u badalaan AVCHD ama qaab kasta oo kale in u wmv fudayd iyo qanacsanaanta iyo sida loo hubiyo in faa'iidooyinka soo socda ee wmv waxaa loo tixgeliyaa ku daray talo waxaa sidoo kale in la xuso in geeddi-socodka waa mid aad u fudud in la raaco:
The faylasha ku jira qaab wmv waxaa si fudud loo wareejiyay iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in qaabka loo isticmaalaa halkii AVCHD si ay u gudbiyaan files ee fudud iyo sameecadda ah hab sameeyo. Ilaalinta ee tayada waa wax kale inuu xaqiijiyo in wixii kaloo la sameeyo arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ku tahay in uu qaato ugu wanaagsan iyo waayo-aragnimo guud oo wanaagsan oo ay diinta files si ay wmv oo markaas waa transferrable dad kale oo la wadaagi karo oo warbaahinta bulshada iyo sidoo fudayd iyo qanacsanaanta.
Waxaa jira tobanaan kun oo dhufto ee madax banaan in ay isticmaalaan qaab wmv si loo hubiyo in wixii kaloo lagu sameeyo hab fiican oo user helo natiijada in ay yihiin gobolka of farshaxanka. Ayaa qaab wmv sidoo kale waa qabow si ay u isticmaalaan sidii ay hubineysaa in saxafiyiinta ay dhufto ee kale ee waa wax fudud oo websites ayaa waxaa sidoo kale aqbali habka ugu fiican.
Part2: Isticmaal Wondershare Video Converter Ultimate si loogu badalo AVCHD in wmv
Waa mid ka mid ah convertors ugu wanaagsan ee lagu qaban shaqada. Ka dib waa hab la xiriira barnaamijka si user ah u isticmaali karaa si fudud oo ku qanacsan tahay:
URL ayaa http://www.wondershare.com/guide/video-converter-ultimate.html waa in ay soo booqdaan si ay u hubiyaan in barnaamijka la soo bixi oo bilaabay:
File AVCHD waxaa markaas in la raran adigoo riixaya badhanka ku darto files ku yaalla sawirka kor ku xusan:
Laga soo bilaabo guddi saxda ah qaab la doonayo waa in la soo xulay:
Button diinta waxaa markaas in la sii adkeeyey si loo hubiyo in hannaanka uu dhammaado:
Part3: Talooyin sida ay u gudbiyaan videos AVCHD ka kaamirada daaqadaha
Ka dib markii qaar ka mid ah talooyin ah in la raaco kartaa si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican marka ay timaado soo gudbin kala iibsiga u dhaxeeya daaqadaha iyo kaamirada AVCHD ah:
Xogta AVCHD waxaa akhriyin haddii ciyaaryahanka loo baahan yahay ma lagu rakibay. Si loo hubiyo in xogta AVCHD la akhriyo habka ugu wanaagsan waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in user heli waa ciyaaryahanka ugu fiican iyo mid ka mid ah in sidoo kale waa lacag la'aan. Sidaa darteed mid waxay ku taliyeen waa ciyaaryahan VLC in samayn lahaa wixii kaloo ah
Software soo degida sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay oo aan wax arrintan iyo dhibaato. Waxaa sidoo kale in la xuso in barnaamijyada software soo degida waxaa jira bogga internetka si aad u hesho shaqada sameeyey ee isticmaala oo halkan user rating iyo sidoo kale rating guud waa in la tixgeliyaa ka hor dajinta lagu sameeyo.
Doorashada ee qaabka sidoo kale lagu xukumi karaa xaqiiqada ah in dadka isticmaala ay ka jecel oo ah qaabab kale ayaa sidoo kale la hubiyo in qaab tani tusaale wmv looma isticmaalo oo keliya laakiin files ayaa waxaa sidoo kale ku badaley in sida uga wanaagsan ee suurto gal ah si user ah ayaa sidoo kale ku raaxaysan kartaa ugu wanaagsan oo gobolka ka mid ah adeegyada tahay in arrintan la xiriira ka. Waxaa jira tobanaan kun oo convertors mar kale taas oo la hubiyo in files yihiin diinta qaab wmv iyo natiijada ugu fiican ee loo dhiibaa si user ah. Qaybta dambe ee qodobkan waxa kale oo hubin doona in user helo liiska ugu fiican sababta in sababta oo ah qaabab kale aanay u soo noqon in wmv ah. Qaab kale in ka yar yahay wadahadal waa qaab AVCHD in uu si fiican u yaqaan, waayo muuqaalka guud iyo sidoo kale natiijada ugu fiican marka ay timaado kaamirada ah iyo sidoo kale qalab kale oo loo isticmaalo si ay u sameeyaan fiidiyowyada iyo sawirrada toogtaan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in ay hubiyaan in qaab wmv la ciyaaray iyadoo la isticmaalayo qalab software in uu yahay gobolka of farshaxanka iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in ay jiraan tobanaan kun oo qalab software sameeyo in waxaa laga heli karaa internetka ah si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyey user oo ay ka heli tayada ugu wanaagsan oo halkan si aad u hubiso in guulaha guud ahaan waxaa lagu gaaraa hab ugu fiican waxaa lagu talinayaa in la hubiyo in ratings user iyo sidoo kale guud ahaan ah qaab-dhismeedka la xiriirta files waxaa lagu xusay marka ay timaado ah wmv iyo isku darka daaqadaha.
> Resource > Beddelaan > Sida loo badalo AVCHD in QuickTime daaqadaha?